Mucjisada Ciise dhalashadiisa, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
"Ma aqrin kartaa taasi?" dalxiiskii ayaa i waydiiyey, isagoo tilmaamaya xiddig weyn oo lacag badan oo leh qoraal Latin ah: "Hic de virgine Maria Jesus Christus natus est." Waxaan ku idhi, Waan isku dayi doonaa, anigoo isku dayaya inaan tarjuno anigoo adeegsanaya awood buuxda oo ah Latinka khafiifka ah: "Tani waa meeshii Maryantii bikradda ahayd ay ku dhashay Ciise" Ninkii, ayuu yiri. "Ma rumeysan tahay taas?"
Waxay ahayd booqashadaydii ugu horreysay ee aan ku tago dhulka Quduuska ah waxaanan taaganahay guud ahaan Kaniisadda Qudus ee Beytlaxam. Kaniisadda qalcadda leh ee reer-guuraaga ayaa laga dhisay buulkan ama godkan, halkaas oo, dhaqan ahaan, Ciise Masiix ku dhashay. Xiddig qalin ah, oo loo dejiyay sagxadda marmar, ayaa ah inuu calaamadeeyo goobta saxda ah ee dhalashadii rabbaaniga ahayd ka dhacday. Waxaan ugu jawaabey, "Haa, waxaan rumeysanahay in Ciise si layaab leh loogu soo dhoweeyay [oo ku yaal jilibka Maryan]", laakiin waxaan shaki geliyay in xiddigta qalinku ay calaamadisay meesha saxda ah ee ay ku dhalatay. Ninkani, oo ah nin aan caadi ahayn, ayaa aaminsan in Ciise laga yaabo inuu ku dhashay guur la'aan iyo in dhacdooyinka Injiilka ee ku saabsan dhalashada bikradaha ay ahaayeen isku dayo lagu daboolayo xaqiiqda naxdinta leh. Qorayaasha Injiilka, wuxuu u maleynayay, inay si fudud uga amaahdeen mowduuca dhalashada ka sarraysa sheekooyinka taariikhiga ah ee jaahilka. Mar dambe, sidii aan u soconayn agagaarka aagga murugaysan ee barxadda weelasha ka baxsan kiniisadda qadiimka ah, ayaannu si qoto dheer uga wada hadalnay mowduuca.
Sheekooyinka caruurnimadi hore
Waxaan sharxay in ereyga "dhalashada bikradaha" uu tilmaamayo rimidda asalka ah ee Ciise; Taasi waa, rumaynta in Ciise lagu helay Maryan iyada oo loo marayo shaqadii cajiibka ahayd ee Ruuxa Quduuska ah, iyada oo aan lahayn aabe bini aadam ah. Caqiidada ah in Maryan ay tahay waalidka kaliya ee dabiiciga ah ee Ciise waxaa si cad loogu baray laba marin ee Axdiga Cusub: Matayos 1,18-25 iyo Luukos 1,26-38. Waxay ku tilmaameen fikirka Ciise ka sarraysa inuu yahay xaqiiqo taariikhi ah. Matthew wuxuu noo sheegayaa:
"Laakiin dhalashada Ciise Masiix waxay u dhacday sidan oo kale: Markii hooyadiis Maryan oo Yuusuf ay aqoon u lahayd inta aan guriga la keenin ay uur ku leedahay Ruuxa Quduuska ah ... Laakiin waxaas oo dhacay inay noqdaan oo la dhammaystiro Wixii nebigii Rabbigu ku hadlay nebigii kaasoo yidhi, Bal ogaada, gabadh bikrad ah baa uuraysan doonta oo wiil umuli doonta, Magiciisana waxaa loo bixin doonaa, Cimmaanuu'eel; (Matayos 1,18:22, 23).
Luukos wuxuu sharraxaya falcelinta Maryan markay ku dhawaaqday malaa'igta dhalashada bikradda: «Maryan waxay malaa'igtii ku tidhi: Sidee baa taasi u dhici doontaa, maxaa yeelay anigu ninna garan maayo? Malaa'igtii baa u jawaabtay oo ku tidhi, Ruuxa Quduuska ah ayaa kugu soo degi doona, oo xoogagga Kan ugu sarreeya ayaa hoosiis kuu noqon doona. Sidaa darteed kan Quduuska ah oo dhalan doona waxaa loogu yeedhi doonaa Wiilka Ilaah, (Luukos 1,34-35).
Qoraa walba si sheeko kala duwan ayuu ula dhaqmaa. Injiilka Matayos ayaa loo qoray akhrinta Yuhuudda wuxuuna la tacaamulay dhammaystirka sheegistii Axdigii Hore ee Masiixa. Luukos, oo ahaa Masiixi Masiixi ah, wuxuu lahaa maskaxda Giriigga iyo dunida Roomaanka markii uu qorayay. Wuxuu lahaa dhagaystayaal aad u qurux badan - Masiixiyiin asal ahaan jaahiliin ah oo ku noolaa meel ka baxsan Falastiin.
Aynu haddaba dib u eegno xisaabta Matayos: "Dhalashadii Ciise Masiix waxay u dhacday sidan oo kale: Markii hooyadiis Maryan oo Yuusuf ay taqaanay, kahor intaanu guriga keenin inay uur leedahay Ruuxa Quduuska ah" (Matayos 1,18). Matthew ayaa sheekada ka sheegaya aragtida Yuusuf. Yuusuf wuxuu si qarsoodiya uga fiirsaday jebinta hawsha. Laakiin malaa'ig baa Yuusuf u soo muuqatay oo xaqiijisay isagoo leh: Yuusufow, ina Daa'uudow, ha ka cabsan inaad naagtaada Maryan kuu qaadatid; Waayo, waxay ka heshay Ruuxa Quduuska ah » (Matayos 1,20). Yuusuf wuu aqbalay qorshaha rabaani ah.
Markhaati ahaan u ah akhristayaashiisa Yuhuudda inuu Ciise yahay Masiixa, Mat wuxuu raaciyay: “Laakiin waxaas oo dhan waxay u dhaceen in la oofiyo wixii Rabbigu kaga dhex hadlay nebiga oo yidhi, Bal ogaada, gabadh bikrad ah baa uuraysan doonta oo waxay dhali doonaan wiil, oo magiciisana waxay u bixi doonaan Cimmaanuu'ee, taasoo micneheedu yahay, Ilaah baa inala jooga (Matayos 1,22: 23). Tani waxay tilmamaysaa Ishacyaah 7,14.
Isaga oo fiiro gaar ah u leh doorka haweenka, Lukas wuxuu sheekada uga sheegayaa aragtida Maria. Xusuustii Luukos waxaan ka akhrinaa in Ilaah u soo diray malaa'ig Jibriil oo Maryan u timid Naasared. Jibriil wuxuu ku yidhi: - Ha baqin, Maryayow, waxaad nimco ka heshay Ilaah. Bal eeg, waad uuraysan doontaa, oo waxaad dhali doontaa wiil, oo magiciisana waxaad u bixin doontaa Ciise, (Luukos 1,30-31).
Sidee ayay taasi u dhacday inay dhacdo, ayay weydiisay Maryan, maadaama iyadu bikrad ahayd? Jibriil ayaa u sharaxday in tani aysan noqon doonin ruridda caadiga ah: «Ruuxa Quduuska ah ayaa kugu soo degi doona, oo Ilaaha ugu sarreeya ayaa kugu dabooli doona; Sidaa darteed kan Quduuska ah oo dhalan doona waxaa loogu yeedhi doonaa Wiilka Ilaah, (Luukos 1,35).
Xitaa haddii uurkeeda dhab ahaan loo fahmi lahaa oo ay sumcadeeda khatar galin karto, Maria waxay si geesinimo leh u aqbashay xaalada aan caadiga ahayn: "Bal eeg, waxaan ahay addoontii Rabbiga," ayay tiri. "Waxay igu dhacdaa sidii aad sheegtay" (Luukos 1,38). Mucjiso ahaan, Wiilka Ilaah wuxuu galay meel iyo waqti wuxuuna noqday embriyaha aadanaha.
Ereygii wuxuu noqday jidh
Kuwa rumeysan dhalashada bikradaha badanaa waxay aqbalaan in Ciise nin u noqday badbaadadeenna. Dadkaas oo aan aqbalin dhalashada bikradda waxay u fahmaan Ciise reer Naasared inuu yahay aadame - iyo sidii qof aadane ah. Caqiidada dhalashada bikradaha waxay si toos ah ula xiriirtaa caqiidada jidhka, inkasta oo ayna ahayn isku mid. Islaantii (Ahaanshaha jidh ahaaneed, macnaha "isku-darka") waa caqiidadda xaqiijineysa in wiilka weligiis ah ee Eebbe ku daray jidhka bini-aadamka oo ilaahnimadiisa isla markaana noqday bini-aadam. Caqiidadan ayaa ku muujineysa sida ugu cad ee hordhaca ah ee Injiilka Yooxanaa: "Ereyguna jidh buu noqday oo waa ina dhex joogay" (Yooxanaa 1,14).
Caqiidada dhalashada gabadha bikradda ah waxay leedahay in rimidda ku dhacday Ciise si mucjiso ah isagoon lahayn aabe bini aadam ah. Insaanku wuxuu leeyahay Ilaah wuxuu noqday jidh; dhalashada bikradda ayaa inoo sheegaya sida. Islaannimadu waxay ahayd dhacdo kafeysan oo ka dhalatay dhalasho gaar ah. Haddii cunugga dhalan lahaa ay bini-aadam uun ahaan lahaayeen, looma baahna uuritaanka rukunnimada ka sarreeya. Ninkii ugu horreeyay, Aadan, tusaale ahaan, sidoo kale waxaa la yaab ku sameeyey gacanta Ilaah. Isagu ma lahayn aabbe iyo hooyo toona. Laakiin Aadan Ilaah ma ahayn. Ilaah wuxuu go'aansaday inuu galo aadanaha iyada oo dhalashada bikradda ah ee heer sare ah.
Sidii aan soo aragnay, kelmadaha ku xusan Matayos iyo Luukos way cadahay: Maryan waxay ahayd bikrad markii Ciise jidhku ku aqbalay Ruuxa Quduuska ah. Waxay ahayd mucjiso xagga Eebbe ka timid. Laakiin soo bixitaankii fiqi ahaaneed ee xorriyadda - oo ay ka shakisan tahay guud ahaanba wax kasta oo ka sarraysa - weedhahan Baybalka ayaa la weydiiyay sababo kala duwan awgood. Midkood waa asalkii la filayay inuu ka soo daaho akoonnada dhalashadii Ciise. Fikraddan ayaa ku doodaysa sidii sidii caqiidada Masiixiyadii hore la aasaasay, Masiixiyiintu inay bilaabeen inay ku daraan waxyaabo khiyaal ah sheekada muhiimka ah ee nolosha Ciise. Dhalashada bikradda, ayaa la sheegay, inay si fudud khayaali ahaan ugu ahayd habka ay u muujinayaan in Ciise yahay hadiyadda Eebbe siiyay aadanaha.
Seminar-kii Ciise, waa koox ka kooban aqoonyahanno Kitaabka Quduuska ah oo xor u ah ereyada Ciise iyo wacdiyeyaasha, ayaa qaata aragtidan. Fiqigaan fiqi ahaaneed waxay diidaan koontada kitaabiga ah ee ku saabsan uurka iyo dhalashada Ciise iyagoo ugu yeeray "abuur dambe". Maria, waxay ku soo gabagabeeyeen, waa inay xiriir galmo la yeelatay Josef ama nin kale.
Qorayaasha Axdiga Cusubi miyey ku lug leeyihiin khuraafaad iyagoo si ula kac ah uga dhigaya Ciise Masiix mid weyn? Miyuu ahaa nin "nebi aadam ah" oo keliya, "nin caadi ah oo wakhtigiisii", kaas oo markii dambe lagu qurxiyo kuwa raacsan ee caqiidada leh aura ka sarreeya si ay "u taageeraan diintooda Masiixiyiinta"?
Fikradaha noocan oo kale ah suurtagal maaha in la sii wado. Labada warbixin ee dhalashada ee Matth fromus iyo Lukas - oo ay ku jiraan waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin iyo aragtidooda - way ka madax bannaan yihiin midba midka kale. Run ahaantii, mucjisada Ciise rimidda ayaa ah qodobka kaliya ee ka dhexeeya dhexdooda. Tani waxay ina tusinaysaa in dhalashada bikradda uu ku saleysan yahay caado hore, dhaqan caan ah, oo aan ku saabsana fidin fiqi ahaaneed ama horumarin caqiido.
Mucjisooyinka miyay waqtigoodii dhaafeen?
In kasta oo ay aqbalitaan ballaaran ay ka heleen kaniisaddii hore, dhalashada bikradda waa fikrad adag dhaqamo badan oo casri ah, xitaa qaar Masiixiyiin ah, dhaqankeenna casriga ah. Dad badani waxay u maleynayaan in fikirka rimidda hoosaadka ay kareyso jilicsanaanta. Waxay sheeganayaan in dhalashada bikradda inay tahay caqiido aan yareyn oo ku taal geeska Axdiga Cusub oo macno yar u leh farriinta injiilka.
Diidmada dadka falcelinta leh ee ka sarraysa waxay la jaan qaadaysaa aragtida adduunka iyo aadanaha. Laakiin Masiixi ah, ka tirtiridda heer sarre ka dhalashada dhalashada Ciise Masiix macnaheedu waa tanaasulid asalkiisii ​​rabbaaniga ahaa iyo macnaha aasaasiga ah. Maxaa loo diidi karaa dhalashada bikradaha haddii aan aaminsanahay ilaahnimada ciise masiix iyo sarakiciddiisa kuwii dhintay? Haddii aan u oggolaanno bixitaan ka sarraysa xagga sare (sarakicidda iyo u dabbaaldega], muxuu u weynaan waayey soo gelitaan ka sarreeya dunida? Ku xadgudubka ama diidmada dhalashada gabadha bikradda waxay xukumaan caqiidooyinka kale ee qiimahooda iyo macnahooda. Ma hayno aasaas ama awood inooga hartay waxa aan rumeysan nahay Masiixiyiin ahaan.
Ilaah ku dhashay
Ilaah wuxuu ku lug leeyahay naftiisa adduunka, wuxuu si firfircoon u farageliyaa arrimaha aadanaha, wuxuu ka gudbiyaa shuruucda dabiiciga ah haddii loo baahdo si loo gaaro ujeedkiisa - oo wuxuu noqday hilib [bini aadam] iyadoo loo marayo dhalasho bikrad ah. Markii Ilaah ku soo galay jidhka bini-aadamka shakhsiyan ciise, muu dhiibin ilaahnimadiisa, laakiin wuxuu bini'aadanka ku daray ilaahnimadiisa. Isagu wuxuu ahaa Ilaah iyo nin (Filiboy 2,6-8; Kolosay 1,15: 20-1,8; Cibraaniyada 9).
Ciise asal ahaan ka sarraysa ayaa ka dhigaya dadka insaanka kale. Ujeeddadiisu waxay ahayd Ilaah-go’aansaday marka laga reebo shuruucda dabeecadda. Dhalashada bikradda waxay muujineysaa heerka uu wiilka Ilaah diyaar u ahaa inuu noqdo Bixiyahayaga. Waxay ahayd mudaharaad yaab leh oo nimcadiisa iyo jacaylkiisa Ilaah (Yooxanaa 3,16) isagoo fulinaya ballanqaadkiisii ​​badbaadada.
Wiilka Ilaah wuxuu noqday mid inaga mid ah oo badbaadiya innagoo qaadanay dabeecadda aadanaha si uu innaga dhinto. Wuxuu ku yimid jidhka, in kuwa isaga rumaystaa laga soo furan karo, heshiisiin karo oo la badbaadin karaa (1 Timoteyos 1,15). Kaliya kan ahaa Ilaah iyo binu-aadmiga ayaa bixin kara qiimaha weyn dembiyada aadanaha.
Sida Bawlos u sharraxay: «Laakiin markii wakhtigii buuxsamay, Ilaah wuxuu soo diray wiilkiisii, oo naag ka dhashay oo sharciga ka hoosaysay, si uu u furto kuwii sharciga ku hoos jiray, si aannu carruur u yeelan karno. (Galatiya 4,4: 5). Kuwa aqbala Ciise Masiix oo rumaysta magiciisa, Ilaah wuxuu ku deeqayaa hadiyadda qaaliga ah ee badbaadada. Wuxuu ina siiyaa xiriir shaqsi ah oo aan isaga la lahaano. Waxaan noqon karnaa wiilal iyo gabdho Ilaah - "Carruurta aan ku dhalan dhiigga, ama doonista jidhka, ama doonista ninka, laakiin xagga Ilaah ka timid" (Yooxanaa 1,13).